မြတ်လေးငုံ: အမေ မအိုသေးပါဘူး (အမေစု သို့)
အမေ မအိုသေးပါဘူး (အမေစု သို့)
အမေ မအိုသေးဘူးဆိုတာ ကျနော်သိနေတယ် အမေ
ဦးခေါင်းထက်က လင်းယုန်ငှက်ရဲ့ တောင်ပံခတ်သံလို
အမေ့ရဲ့ လေညှင်းတွေ ကျနော်ရှိုက်ရတယ်
အမေ့ရဲ့ အရောင်အဝါတွေ ကျနော်မြင်ရတယ်
အမေနဲ့ ကျနော် တစ်နေရာဆီ နေနေရပေမယ့်
အမေ့ရဲ့ စကားတွေကို ဦးညွတ်လေးစားနားထောင်
အခုလည်းအမေ့ရဲ့ အားမွေးထားကြပါ မိန့်ခွန်း
ပန်းပွင့်လေးတွေ နိုးထစေချင်တဲ့ ဆန္ဒ
ဗီဗစွမ်းရည်တွေ ထက်သထက် ထက်လာလေ
အမေ့ကို ကျနော်တို့ ပိုဦးညွတ်လေပါပဲ။
ဘာမှ ပြန်မလာတဲ့ ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတာ ရှိမှ မရှိဘဲ အမေရာ
ဒီလိုပဲ . . .
ဒီကောင်တွေဆီက မတောင်းရသေးတဲ့ လျော်ကြေးတွေကလည်း
သူတို့ ဘဝတစ်ခုလုံး ရင်းရလိမ့်မယ်
သူတို့ရဲ့ ဆံပင်တွေ ကျနော်တို့ မလိုချင်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် သူတို့ပေးရလိမ့်မယ် အမေ
သူတို့ပေါ်သင့်ထားတဲ့ ကျိန်စာတွေက နောင်ဆယ်ဘဝတောင်
ကျယ်ပြန့်လာတဲ့ တံတိုင်းတွေ ကျနော်တို့ ဖြိုဖျက်
ဆူးကြိုးအထပ်ထပ် ရစ်ပတ်လာတဲ့ စာပေတွေကြားမှာ
အသိညဏ်ဝမ်းစာ နဲ့ အမှန်တရား ရှာဖွေရင်း
နီရူဒါ ထိရှလာပြီ ၊ ဗရက်ကို စွဲမက်လာပြီ
သူတို့ကို ကြည့်ရေးထားသလိုပါပဲ . . .
အမြစ်မကျွတ်ခင် အရာဝင်တာပါ (မောင်စိမ်းနီ)
ဂျစ်ကားတောင် မောင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပဲ
သခင်ကိုယ်တော်မိုး ကဗျာဆရာ သူ့ရဲ့ မျိုးချစ်ကဗျာပေါ့။
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ မျက်မကန်းတဲ့ ကဗျာဆရာတွေ
ငုယင်ဗန်ထရွိုင်း ၊ ချေဂွေဗာရာ ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်
ဒါပေမယ့် ဒီခေတ်ရဲ့ ညနက်နက်မှာ လမင်းကြီးသာလိုက်တာလို့
မရေရာတဲ့ လေပွေအောက်မှာ ကြွေသွားတဲ့ လက်ပံတွေ
မပွင့်ခင်က အရောင်ပြောင်းသွားတဲ့ နှင်းဆီတွေ
ပြာလဲ့လဲ့ ဇာခန်းဆီးရဲ့ အထဲမှာ
အိပ်စရာ မရှိတဲ့ညမှာ မိုးတွေအရမ်းရွာတာပဲဆိုတဲ့
တော်လှန်ကဗျာဆရာတွေရဲ့ ခံယူချက်ကို သိစေချင်ပါရဲ့
နေ့ခင်းစာပျောက်နေတဲ့ ဘဝကို သိစေချင်ပါရဲ့
စာမကြည့်ရတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ညကို သိစေချင်ပါရဲ့
ဪ . . . အဆီယစ်နေတဲ့သူတွေ . . .
ယိုင်နဲ့ ယိုင်နဲ့ နဲ့ ယိုင်နဲ့
ယုံတမ်းရှည်ရှည်နဲ့ တစ်ထောင့်တစ်ည လှည့်ကွက်တွေ
လင်းတတစ်ကောင်လောက်မှ သစ္စာမရှိတဲ့ ကတိတွေ
ပစ်ချပေးလိုက်တဲ့ အကြွင်းအကျန် မျှော်လင့်ခြင်း အကျိုးအကြေတွေ
တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်လောက်မှ အသုံးမကျတဲ့ စကားတွေ
အမေ့ရဲ့ အားပေးစကားတွေ အမြဲကြားချင်နေမိတယ်
တမင်လုပ် ထောင်ချောက်တွေနဲ့ ဟော့ဒီကမ္ဘာထဲမှာ
ဘယ်လိုလှမ်းရမယ်ဆိုတာ အမေရှေ့က လမ်းပြပါ
အမေ့ရဲ့ ခွန်အားနဲ့ အသိညဏ်တရားတွေ
သူတို့ ခိုးဝှက်ချင်နေကြတယ် ၊ ခိုးဝှက်နေကြတယ် . . .
. မ . ရ . ပါ. ဘူး . . .
ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ အမေ့ကိုသာ မျှော်လင့်နေ
စောင့်စားနေမှာပါ . . .
ရင်ထဲက ဆန္ဒတွေ ၊ မြေမြှုပ်မိုင်းတွေနဲ့
အမေသာ ရှေ့က လက်ခုတ်တစ်ချက်တီးလိုက်ပါ
ကောင်းကင်ရှည်ရှည်တစ်လျှောက် မဆုံးနိုင်တဲ့ လက်ခုတ်သံတွေ
မြင်းခွါတစ်ချက် မပေါက်ခင်က မီးဟုန်းဟုန်းတောက်ရဲပါတယ်
ဦးခေါင်းထက်က လင်းယုန်ငှက်ရဲ့ တောင်ပံခတ်သံလို
လတ်ဆတ်နေဆဲပါ အမေ . . .
အမေ မအိုသေးပါဘူး ။ ။
(အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို့ ရည်ညွှန်းပါသည်)
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001669429212 မှ ပြန်လည်မျှဝေပေးပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, June 18, 2011
Labels: မွေးနေ့ လက်ဆောင် ကဗျာ
May May Nay Kaung Larr (For Our Hero Our Leader Da...
Daw Aung San Suu Kyi's Special Message to World Ec...
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုအောင်ဆန်း၊ ဗမာ့တပ်မတော် ဖ...
ရုရှပြန် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုလုပ်ရပ်အား အရေးယူရန် ပုဂ္ဂို...
ပထမဆု လိုချင်လို့ ငွေပေး သူလည်းရှိနေပြီ၊ ပထမဆု ပေး...
အဟီး ဆော်ရီး ဆော်ရီး မြန်မာပြည်က ဗီဒီယို ကားကြီး
လူချင်း တူပါလျက် အဘယ့်ကြောင့် ကွဲပြား ရသနည်း
လ ကုန်တဲ့နေ့ လစာချက်ချင်းရတယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မရှိခဲ့...